Ny lova navelan'ny mpino - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny lovan'ny mpino
Nofaritan'i Isaia ny sasany amin'ireto fifaliana ireto rehefa naminany izy fa hisy firenena hiverina amin'ny tanin'izy ireo: “Ny navotan'i Jehovah dia hiverina ka hankany Ziona amin'ny fifaliana; fifaliana mandrakizay no ho eo an-dohany; Hafaliana sy fahasambarana no hisambotra azy ireo, ary ny fanaintainana sy ny fisentoana dia ho afa-mandositra » (Isaia 35,10). Ho eo anatrehan'Andriamanitra isika ary ho sambatra kokoa noho ny taloha. Io no tian'ny Kristianisma amin'ny fomba nentim-paharazana hampitana ny foto-kevitra hoe "mankany an-danitra".